UMsombuluko Wesinqumo: Kungani kumele banqobe nakanjani kulolu khetho - Bayede News
UMsombuluko Wesinqumo: Kungani kumele banqobe nakanjani kulolu khetho
Sekunenkunzi entsha esibayeni sepolitiki
Ngaphansi kwesimiso sedemokhrasi umuzwa owejwayelekile yilowo wokungazi ukuthi nxa kunokhetho iyozala nkomoni. Lapho abangenele ukhetho bekhankasa kuze kube ngumzuzu wokugcina ngoba kabazi ukuthi uma sekuqedwe ukubalwa ngobani abayomenyezelwa njengabanqobi.
Kulolu khetho oluzayo ngoMsombuluku mhla lulu-1 kuLwezi ukhona lo muzwa kanti ziningi izizathu ezenza lokho. Kukhona leso esithinta ukunengwa kwabantu ngenxa yokuqaphela ukuthi izinto kazenzeki njengoba befuna noma bethenjisiwe. Kulaba usuku lokhetho wusuku lokujezisa abaholi namaqembu angabaFarisi. Nokho olunye uhlangothi lwalaba luthi lona luyovota “ngezinyawo” njengoba lungeke lulubhade ezikhungweni zokuvota ngoba selukhathele izithembiso ezingekho. Kulabo abangenele ukhetho lolu hlobo lwabantu lusho ukuzuza nokulahlekelwa nokwenza okhankasayo alale engalele.
Ngakolunye uhlangothi ukhetho esiya kulo lufika nje ziningi zinto ezingahambi njengokwejwayelekile. Imikhankaso nonyaka ayifikanga ezingeni elejwayelekile. Lokhu kucace bha uma kufika kuzikhangisi zezingqwembe lapha emigwaqeni.
Esimweni esejwayelekile kushaya lezi zikhathi amadolobha amakhulu namancane emibalabala yizikhangisi. Kwake kwaba nokhetho lapho iqembu eliphikisayo iDemocratic Alliance (DA) yabe izishaya isifuba isho khona ukuthi izingqwembe zalo eThekwini kuphela zedlula amanye amaqembu kuzwelonke. Lokhu ngokwababesho njalo kwabe kuwumlayezo wokuthi leli qembu lihlelekile nokuthi linempokophelo yokunqoba.
Nonyaka akekho emaqenjini ongathi unemali eyanele yokuqhuba ukhetho kwazise umthetho omusha wokuxhasa amaqembu epolitiki iPolitical Party Funding Act (PPFA) ithi onke amaqembu kawaveze ukuthi aphekiswa ngobani sekwenze abanye baqhela kosozimali. Kulabo abavame ukuphekisa amaqembu yisikhathi esilukhuni ngoba uma sebaziwa kukhona ukwesaba ukuthi kungenzeka uma labo ababaxhasile bengaphumeleli bangase bathole ulaka lwabanqobi.
Ukuxhaswa ngasese njengoba kulawulwa yiPPFA ebeka ukuthi yimiphi iminikelo yangasese evumelekile noma engavumelekile futhi ebeka nomklamo wenani lapho kungaqalwa kudalulwe umnikelo.
Iminikelo engavumelekile ibandakanya leyo yabaxhasi bangaphandle kwezwe ngaphandle uma kungeyokuthuthukisa amakhono nenqubomgomo futhi uMthetho uthi iminikelo yangaphandle mayingedluli ezigidini ezi-R5 ngonyakamali owodwa. Yonke eminye iminikelo yangasese yona mayingeqi ezigidini ezili-R15 ngonyakamali owodwa. Lokhu kusho ukuthi uma iqembu elithile njengoba ekhona nje belithola uxhaso lokhetho phesheya lwezilwandle lokhu sekuzoba lukhuni satshe noma kungafani nakuqala. Ngaphansi kwalesi simo zimbili izithebe amaqembu angacosha kuzo ukwesekwa, okuyiRepresenative Political Party Fund (RPPF) kanye neMulti-Party Democracy Fund (MPDF).
IRPPF ihlinzeka izimali zamaqembu epolitiki amelelekile eZishayamthetho kuzwelonke nasezifundazweni futhi baxhaswe yiNational Revenue Fund ngendlela yokuxhsa umphakathi. Imali yabiwa ngale ndlela:
I-1/3 ngokulingana (33.3%): Ingxenye eyodwa kwezintathu yabiwa ngokulinganayo kuwo wonke amaqembu anezihlalo ePhalamende kuzwelonke naseZishayamthetho ezifundazweni. Izi-2/3 ngokwezihlalo (66.6%): Izingxenye ezimbili kwezintathu zabiwa ngokwezihlalo iqembu elinazo ePhalamende kuzwelonke naseZishayamthetho ezifundazweni.
Ngakolunye uhlangothi iMPDF ifanele ukuhlinzeka amaqembu ngezimali ezitholakale ngeminikelo yangasese eyenziwe kuyo. Igqugquzela abantu ukuba banikele egameni ledemokhrasi nasekuqhudelaneni okunobulungiswa kunokuba kuhambe ngokobuqembu
IMPDF idinga okungenani isigidi esisodwa samarandi (R1 000 000) ngaphambi kokuthi yabe futhi iyaba ngendlela efanayo naleyo yeRPPF. Zombili lezi zikhwama zisingethwe ngabe-Independent Electoral Commission (IEC).
Udokotela uqagula ukuthi ukhetho lungenza kugadle igagasi lesi-4 lokhuvethe
Ngale kokhetho lesi simo sisilunguzisa ekutheni amaqembu amaningi azobe enezikweletu ezixakile ngale kokhetho nokwenza “ukugembula” kwawo kumele kube nomvuzo ngoba okungenani uma kuqokwe amakhansela amaningi iqembu lelo lingakwazi ukuwakhokhisa okweshumi ukuze kubhekwane nezindleko zokhetho nokunye okuphathelene nalo.
Enye indlela yokubulala umangobe
Ngenxa yokuxakeka kubukeka amaqembu ikakhulukazi lawo aphethe omasipala noHulumeni wesifundazwe nokazwelonke beqhamuke neqhinga thizeni lokuthi kube khona imikhankaso. ElaboHlanga lihambele eminye yemicimbi yomasipala KwaZulu-Natal nayilapho kube nobufakazi obuqandula ikhanda ukuthi abamaqembu abusayo komasipala ahlanganise izinhlelo zomasipala ukukhankasela iqembu. Lokhu bekwenziwa kusetshenziswa ‘izindlela nezinhlelo ezisemthethweni’ ukuze imikhankaso lena yamukeleke njengekamasipala.
Abanye bomasipala basebenzise izinhlelo nemali yokuhambela imiphakathi kuyokwethula imiklamo eminye esivele yabikwa ngoZibandlela nyakenye nangoMasingana nonyaka njengokulandisa kohlelo lwentuthuko edidiyelwe. Ubufakazi bokuthi konke lokhu obekwenzeka bekuyizinhlelo zokhetho, cishe kuyo yonke imicimbi obekuthiwa ngekamasipala bekuba khona umholi walelo qembu ongaveli kumasipala onomcimbi. Abaholi laba bebevela esifundeni, esifundazweni nakuzwelonke. Okunye obekucaca wuhlobo lwabantu abebeza klemicimbi, iningi bekuyilabo abahambisana neqembu lelo nobekubonakala ngemifaniswano neziqubulo.
Izikhangiso emsakazweni nakumathelevishini bezisho khona ukuthi lokhu okubekwa njengohlelo lomkhandlu empeleni ngumkhankaso. Lo mkhuba ububonakala nakubo abaholi bakahulumeni kusifundazwe kanye nakuzwelonke. Abukho ubufakazi bokuthi ongqongqoshe, abaphathiswa bebehambela izindawo zemikhankaso besenzisa izinsiza zikahulumeni okuyizimoto nabaqaphi. Kube ngesifanayo koNdunankulu, uMengameli nesekela lakhe nakubo abukho ubufakazi bokutho lokhu kuzulazula bebekwenza ngemali yabo noma yeqembu.
Yize imithetho yakuleli ingakuvimbi ukuba iziphathimandla zisebenzise izinsiza zombuso kwamanye amazwe lokhu kuyaqashelwa njengosuke engenele ukhetho okungaba ngumengameli, undunankulu noma ikhansela kumele liveze ukuthi ngabe linamali nokuthi liyicoshaphi imali yokukhankasa.
Ezinye izinsolo yize ezingaqinisekiwe wukuthi amaqembu agcine esekhalela kosomathenda nabo abasukumele phezulu bevikela isinkwa sabo sangomuso. Iningi lemikhankaso ngokulandela umthetho wokhetho isongwe izolo eminye izogoqwa ngoLwesihlanu.
nguMfo waKwaNomajalimane Nov 1, 2021